တီကောင်နဲ့ လိပ်ပြာ – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Author lettwebawPosted on 10 April 2011 Categories Discussion, Reproduction, Thoughts
3 thoughts on “တီကောင်နဲ့ လိပ်ပြာ”
10 April 2011 at 7:46 pm
ကျွန်တော်လည်း ဆရာတော့်ကို လူချင်းတော့ တစ်ခါမှ ဖူးခွင့် မကြုံဖူးပါသေးဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ၉ တန်းနှစ်က စလို့ ဆရာတော်ရဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို မထင်မှတ်ဘဲ ဖတ်မိရာကစ နောက်ပိုင်း ဆရာတော်ရဲ့ စာအုပ်တွေ တော်တော်များများကို မလွတ်တမ်း ဖတ်ဖြစ်ပြီး ဆရာတော့်ကို ကိုယ့်ဆရာသမားအရင်းလို၊ ဖခင်အရင်းလိုပါ စိတ်ထဲမှာ လေးစားကြည်ညိုမှုနဲ့ နေ့စဉ် ဆရာတော်ကိုလည်း ရည်မှန်းကန်တော့၊ ဆရာတော်ရဲ့ အဆုံးအမတွေကိုလည်း တတ်နိုင်သမျှ နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပြီး နေဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာတော်ရဲ့ အဆုံးအမတွေကို အခုလို ထပ်ဆင့်ဖော်ပြ အတွေးတွေ ချဲ့ထွင်ပြီး မျှဝေပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာ ခင်ဗျား။
အင်း ၀င်လာဖတ်တဲ့ တစ်ချို့သူတွေက ဘယ်ဆရာတော့် စာအုပ်ပါလိမ့်လို့ သိချင် ဖတ်ချင်ကြမှာဗျ။ အဲတော့ ဆရာပြောလို့ မရပေမဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ ပြောလို့ ရတော့ ဆရာတော့် နာမည် ရေးခဲ့လိုက်မယ်ဗျာ။ ဆရာတော်စာအုပ်တွေ ဖတ်တဲ့သူတွေ များလာစေချင်လို့ပါ။
ဆရာတော် ဦး…. (….) ပါဗျာ။ [Deleted by Admin]
ဆရာတော့် နောက်ဆုံးထွက်တဲ့စာအုပ်က “မင်္ဂလာတရားတော်”ပါ။
[This comment was edited before moderation by Admin]
I love this and I’m looking forward that kind of story in your website and on facebook website
Previous Previous post: အရေးပေါ် အခြေအနေအတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှု
Next Next post: ဆယ်ကျော်သက်နဲ့ ပြစ်ဒဏ်